Somaliland: Maxkamadda Sare oo Ansixisay Natiijadii Doorashada Madaxtooyada - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Maxkamadda Sare oo Ansixisay Natiijadii Doorashada Madaxtooyada
Maxkamadda dastuuriga ah ee Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa shalay ansxisay natiijadii hor-dhaca ahayd ee doorashadii madaxtooyada oo dalka ka dhacday 13-kii bishan, taasoo ay Sabtidii toddobaadkan maxkamadda sare u soo gudbiyeen komishanka doorashooyinku.
Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed, oo ay hareero fadhiyeen toban garsoore oo ka tirsan maxkamadda sare ayaa ku dhawaaqay natiijadda rasmiga ah ee doorashadii madaxtooyadda iyo cida ku guulaysatay.
Isagoo sheegay in aanay jirin wax cabasho ama dacwad ah oo ay u soo gudbiyeen xisbiyadda mucaaridku, maadaama oo sida xeerka doorashooyinka Somaliland dhigayo xisbiyadu xaq u leeyihiin in ay cabashadoodda maxkamadda sare u gudbiyaan muddo 20 maalmood ah gudahood ka hor marka komishanku ku dhawaaqaan. Aadan Xaaji Cali Axmed, guddoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland ayaa sidan ugu dhawaaqay natiijadda rasmiga ah ee doorashadda; “Maxkamadda dastuuriga ah ee Somaliland markay aragtay qodobka 60-aad faqradiisa 3-aad ee xeerka lanbar 20/2001, oo sheegaya in marka maxkamadda sare ay hesho qoraaladda raadraaca ee xafiisyada gobolada ee doorashada iyo kuwa xafiiska dhexe ee Komishanka isla markaana hubiso xisaab ahaan iyo sharci ahaan doorashada waxay ku dhawaaqaysaa natiijada doorashada Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa,”ayuu yidhi Aadan Xaaji Cali.
Isagoo hadalkiisa sii watayna waxa uu yidhi “Maxkamadda sare ee dastuuriga ah markay aramgatay dhammaanba qoraaladda ee guddiga doorashooyinka, waxay ansixisay natiijadii ku meel gaadhka ahayd ee doorashadii madaxtooyada 2017 ee ay u soo gudbiyeen komishanka doorashooyinka qaranku, oo ahayd sidan:
“Xisbiga UCID: 23141 cod oo u dhiganta 4.17%. xisbiga Kulmiye: 305.909 cod una dhiganta 55.19%. xisbiga Waddani: 226.092 cod oo u dhigmaysa 40.73%. Taasoo sharci ah in xisbiga Kulmiye oo helay tiradda ugu badan codadka, kuna guulaystay tartanka doorashadii madaxtooyada murrashaxiintiisuna ku guulaysteen xilalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. In Muuse Biixi Cabdi Xildiid, oo ku guulaystay jagadda madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo C/raxmaan C/laahi Ismaaciil Shirre (saylici) uu ku guulaystay jagadda madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland shanta sanadood ee soo socota.”
Dhinca kale maadaama oo aanay jirin wax dacwad ama cabasho ah oo ay xisbiyada mucaaridka ahi u soo gudbiyeen maxkamadda sare, waxaa sharciyan sidaas ansax ku noqotay in jagadda madaxweynaha iyo ku-xigeenka ay ku guulaysteen murrashaxiintii xisbiga Kulmiye. Inkastoo ay hore labada xisbi mucaarid ee UCID iyo Waddani u shaaciyeen markii komishanku natiijadda ku dhawaaqay in ay aqbaleen natiijadii doorashada